Kedu ka m ga esi nyochaa ọnụahịa Amazon na ihe ahịa ngwá ahịa ị nwere ike ịkwado?
N'oge a, ụwa nke oge a nke Web Retailing bụ ka ọ na-agbakwụnye azụ ahịa azụmahịa nke azụmahịa. Ihe ka ọtụtụ n'ime ndị na-ere ere ugbu a nweere onwe ha iji nweta ngwaahịa ha na-edepụta ọbụna na-enweghị ihe ha na-echekwa n'ịntanetị. Ma ọtụtụ mgbe, ndị na-achụ ego novice na-apụ apụ n'ala, tumadi n'ihi na enweghi ike ịme ihe ike dị mkpa karịsịa site na mmalite oge mmalite nke ọrụ ha. Ma ụlọ ahịa dị otú ahụ a ma ama ma jupụtara n'ahịa dị ka Amazon abụghị ihe ọzọ na-achịkwa iwu a na-adịghị mma. Ya mere, n'okpuru ebe a, m ga-egosi gị nhọrọ dị mma nke ngwá ahịa Amazon traktị pụrụ iche na nke ndị ọzọ na-enye aka nke nwere ike ịghọ ihe kachasị mma maka ịmalite ọrụ ịzụ ahịa na-aga nke ọma.
Ụda dị egwu, ekwesịrị m ikweta - cheap gadgets online shopping. Ma ngwá ahịa Amazon a bụ tracker ngwá ọrụ dị ezigbo mkpa n'enyemaka n'ịntanetị, karịsịa mgbe ọ na-abịa ịnye ọnụahịa. CamelCamelCamel nwere ike iziga gị akara ngosi ahaziri (ma ọ bụ site na email, ma ọ bụ Twitter) na mgbanwe ọ bụla ị chọrọ iji nọgide na-eso, dịka ọmụmaatụ mgbe ọnụahịa ngwaahịa ị na-achọ ugbu a na-amalite ịrịgo, ma ọ bụ akaebe, mgbe e mebiri ya ngwa ngwa . Na-ekpuchi ihe dị nde iri na asatọ na Amazon, ngwá ahịa a na-ere ahịa nwekwara ike ịnye gị akụkọ ihe mere eme nke egosipụtara site na sụgharịa ọnụahịa ndị e ji eme ihe. I nwere ike ịgbalị nyochaa ntanetị weebụ ya iji rite uru site na nkwụsị nke usoro nlekota.
Akụkụ nke abụọ nke ngwá ahịa ahịa Amazon bụ nke na-elekwasị anya na ọnụahịa, Keepa na-enye nkwado mba ụwa nke na-ekpuchi ọnụ ọgụgụ ọnụahịa dị omimi karịa 11 mba dị iche iche. Ma mụ onwe m, ọ nwere ike ịghọ nhọrọ zuru oke maka ịchọta ịlele ihe ndekọ akụkọ ihe mere eme, na-eche banyere ọdịdị dị ugbu a ma gbanwee ọnụahịa, iji tụnyere mkpado ọnụọgụ ọ bụla ma chọpụta ihe ndị kachasị ọhụrụ na Amazon. Ihe a na-ekwu maka onwe ya, n'ihi ya, ọ bara uru iji ma ọ bụ ma ọ dịkarịa ala ịnwale.
SellerLogic bụkwa ihe dị oke mkpa iji gbakwunye gị na ngwá ahịa Amazon tracker. Na-eche na mgbe mgbe ọbụna ndị ahịa ọkachamara nwere ike ileghara isi ihe ndị ahịa na-akwụ ụgwọ ahịa. Mgbe ọ na-abịa na-egosi akụkụ ahụ ike, ka ọ dịkwuo oke. Mee n'ozuzu, usoro a na-eme ka o kwe omume ịkwalite ọnụahịa gị n'okpuru ụzọ anọ dị iche iche - Ịzụta Uche (atụmatụ ọnụahịa a tụrụ anya na ị ga-ebugharị ngwaahịa gị na ọnọdụ Buy Buy), Ọnọdụ (uru dị mkpa maka ịchọta ngwaahịa gị etinye na nsonaazụ ọchụchọ ya ọnọdụ a kapịrị ọnụ), Ahịa (ọnụahịa kachasị mma iji mee ka ụzụ ahịa gị dị elu), Ntanye (otu ọnụahịa nke ndị na-emegide gị). N'ezie, e nwere ọtụtụ ụzọ ọzọ ị ga-esi na-akwụ ụgwọ na Amazon, yana ọtụtụ puku ngwaọrụ ndị ọzọ dị iche iche na-arụ ọrụ nyocha ọchụchọ, nyocha ịsọ mpi, nchịkọta ndepụta, wdg. Ihe ka ọtụtụ n'ime ha dị na ịnweta ohere, n'ihi ya, egbula onwe gị na ọnụahịa Amazon naanị - na-aga n'ihu ma na-agagharị ohere ka mma n'ebe ahụ.